Tag: akuko soda 2013 | Martech Zone
Tag: akuko soda 2013
Mbipụta mbụ nke akụkọ 2013 SoDA na-eru ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ echiche 150,000 na nbudata! Nkeji nke abụọ nke akwụkwọ a adịla njikere maka nlele. Mbipụta a na-agụnye ọmarịcha ngụkọta nke echiche ndị isi echiche, ajụjụ ọnụ nwere nghọta na ọrụ echepụtara n'ezie maka ụdị ndị kachasị dị ka Nike, Burberry, Adobe, Whole Foods, KLM na Google. Ndị na-enye onyinye gụnyere ndị ọbịa ọbịa ama ama sitere na akara-acha anụnụ anụnụ, ndụmọdụ na mmalite mmalite, yana ndị na-enye ọkụ sitere na SoDA
Ndi Global Society for Digital Marketing Innovators weputara akuko 2013 ha na mbido afo a. E nwere ụfọdụ nchoputa dị n'ime akụkọ ahụ na atụmatụ abụọ ịzụ ahịa dijitalụ yana mgbanwe na otu ụlọ ọrụ si eji ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ. Nchọpụta Isi Ihe karịrị ọkara nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha na-abawanye mmefu ego dijitalụ ha, yana ọtụtụ mgbanwe site na ngbanwe mmefu ego dị ugbu a na dijitalụ Naanị 16% na-amụba ahịa ha na-emefu.
Njikwa Ahụmịhe Ndị Ahịa na-eji teknụzụ iji nye onye ọrụ ọ bụla ihe na-agbanwe agbanwe yana ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa ogologo ndụ. CXM gụnyere ahịa inbound, ahụmịhe weebụ nke ahaziri iche, yana usoro mmekọrịta ndị ahịa (CRM) iji tụọ, tụọ ma nyochaa mmekọrịta ndị ahịa. Kedu ihe ị ga-eme? 16% nke ụlọ ọrụ na-amụbawanye ego ha na-ere ahịa dijitalụ ma na-emefu ego ha na-emefu. 39% nke ụlọ ọrụ na-abawanye mmefu ego nke dijitalụ ha site na itinye ego ha dị ugbu a